Cuntada guriga lagu kariyo | October 2019
Editor Ee Doorashada October 23,2019
Ugu Weyn Ee Cuntada guriga lagu kariyo
Isticmaalka salad barafka: faa'iidooyinka iyo dhaawaca jidhka bini'aadamka
Waa maxay salaarada qaboobaha, maanta, malaha, qof walba waa ogyahay. Tani waa nooca lettuce ee eegaya (xitaa marka la googooyey) si xoog leh u ekaa badalaha kaabajka cad. Caleemaha waa mid casiir leh oo qallalan (wakhti dheer oo saladh ah waxaa loo yaqaan "guntin"). Waxaa inta badan loo isticmaalaa aasaaska diyaarinta saladhka, iyo waliba fitamiin si loogu isticmaalo cuntooyinka kale iyo suxuunta ugu muhiimsan.
Isticmaalka cabitaanka maple: sifooyinka faa'iidada leh iyo ka hortagga
Soodhiyadayada maple ma aha mid caan ah sida bjørk. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego tirada guryaha ee muhiimka ah, maaha mid ka gaabiya. Gobollada Waqooyiga Ameerika, cabitaankani waa qaran waxana lagu soo saaraa qiyaasta warshadaha. Maqaalka waxaan eegeynaa waxa ka soo baxa soodhada jilicsan, sida ay faa'iido u tahay, sida loo qaato dheecaan khariidad ah iyo waxa laga samayn karo.
All oo ku saabsan sifooyinka faa'iido leh iyo waxyeelada leh ee eggplant
Eggplant (lakin Sololium melongéna) waxaa loola jeedaa dhirta dhirta dilaaga ah ee caanaha dilaaca. Dalkiisa hooyo waa India, Aasiya, iyo Bariga Dhexe. Duurjoogta, midhaha ayaa leh midab casaan ah oo wali ku koraya Hindiya, waxaa laga helaa Burma. Warshad la mid ah miraha yaryar ayaa ku yaal Shiinaha. Sida dhaqanka cuntada loo yaqaan muddo dheer.
Sidee baa malabku uga faa'iideysan karaa geedaha geedaha?
Thanks to maaddooyinka waxtar leh ee lagu sii daayo kaynta geed, aad si weyn u caawin kartaa jirka dib u soo kabashada. Walxaha bogsashada ayaa si gaar ah loo sii daayaa xilliga guga, laakiin qof kastaa ma awoodo in uu booqdo kaynta wakhtigan. Laakiin maanta waxaa jira fursad ah in la helo xaddiga ugu sarreeya ee xitaa guriga, si fudud oo loo isticmaalo malab ka soo geedka geedaha ama caleemaha geedaha, taas oo la jilcaya tiro badan oo ah walxo kala duwan oo faa'iido leh.
Ka ilaalinta qaraha qaraha ee bangiyada ee jiilaalka
Qaraha waa miro yar oo jecel kaas oo siinaya macaan iyo qoyaan xagaaga. Aad bay u taajirsan tahay fitamiinnada, mareellada iyo walxaha kale ee loogu talagalay dadka. Laakiin waxa la sameeyo haddii jiilaalka yimaado, oo aan lahayn berry "si kasta"? In this article waxaan kuu sheegi doonaa sida si habboon u diyaariso watermelon pickled ee bangiyada loogu talagalay jiilaalka, si ay u jeestaan ​​dhadhan fiican iyo caafimaad leh.
Dhaqan ahaan, waxaa loo isticmaalaa khamri laga sameeyey canab. Marka ugu xun - laga bilaabo tufaaxa. Laakiin suuqyada Aasiya waxay og yihiin in ay tahay ciriiri siinaya xigmad, caafimaad iyo waqti dheer. In maqaalka ah waxaan ku sharaxi sida loo sameeyo khamriga tubta at home iyadoo la isticmaalayo cunto kariye fudud. Xulashada iyo diyaarinta plomme Bilowga diyaarinta khamri, dabcan, waxaa lagama maarmaan ah in loo diyaariyo waxyaabaha ku jira.
Waxaan diyaarin karnaa jiilka macaan ee qaboobaha xilliga jiilaalka
Way fiicantahay habeenkii qaboobaha qaboobaha si ay ugu raaxaystaan ​​dhadhankaaga berri xagaaga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku shaqeyso wax yar inta lagu jiro Bisaylkiisa ee jeeriga macaan. Qalabka jikada iyo maacuunta Si aad u xirto jiilka jiilaalka, xafiisku wuxuu u baahnaan doonaa digsi yar oo aad kari karto biyaha, digsi weyn oo loogu talagalay dabeyshaha kushiinka, daboolka ilaalinta, dabool caag ah oo leh godiyo biyo, miisaan, iyo qaaddo.
Casiirka bakeeriga: waxa ku jira, waxa faa'iido leh, sida loo sameeyo iyo loo qaato, haddii ay suurtagal tahay inta lagu jiro uurka iyo naas-nuujinta
Baalumarka badda waa dhaqan aan caadi ahayn oo leh miraha amber casiir leh. Iyo caleemaha, iyo berry, iyo xididdada, iyo jilifku leeyahay awooda lagu yareeyo xanuunka. Iyo casaanka buckthorn badda labadaba caafimaad leh, dhadhan fiican iyo bogsiin. Waxyaabaha ku jira qaybaha Nidaamka isku dhafan ee berry burrito waxa ku jira ku dhowaad dhammaan fitamiinada la yaqaan, aalado wanaagsan oo macdanta ah, asiidhyada dabiiciga ah, buunshaha, antibiyootigyada dabiiciga ah, pectins, serotonin, flavonoids.
Qodobbada waxtarka leh ee sabiibta canabka cad iyo roodhi guriga
Canabtu waxay muddo dheer ku noqotaa sifo aan loo baahnayn oo ah cawska xagaaga ama deyrka. In cirqiga our, waxaad arki kartaa baradho ah noocyo badan, laakiin iyaga ka mid ah khadadka in siiyaan miraha si gaar ah u jilicsan. Cawska caanaha caan ah ayaa iska leh. Aan barano sida loo sameeyo sabiibta delicious ee ka soo baxa berry. Wax yar oo ku saabsan canab: sabiibta cad waa nooc canab ah oo kala duwan oo leh miraha aad u yar ama iyaga oo aan lahayn dhammaantood (sidaas darteed ma jiraan wax sabiib ah oo dabiici ah).
Sida loo isticmaalo qoryaha maqaarka ee loogu talagalay kafeega
Dad badan oo naga mid ah waxay bilaabaan maalinimadeena cibaadada: cabitaanka koob oo ah kafateeriyo iyo tufaax tufaax ah. Laakiin, nasiib daro, qof kasta ma awoodo inuu awoodo sababtoo ah dhibaatooyinka dhiig karka. Waxaa soo baxday in ay jirto bedel wanaagsan oo cabitaankani ku qoslaya - kafee furan. Sida loo kariyo - tani waxay ka wada hadli doontaa maqaalkeena.
Waa maxay casiir macaan waxtar leh. Sida loo doorto casiir cusub iyo miro ku haboon
Tan iyo wakhtiyadii hore, bini-aadanku wuxuu ka warqabaa sifooyinka wanaagsan ee rummaanka. Xitaa Hippocrates waxay u isticmaashay berri loo daaweeyo cudurada kala duwan. Ilaa imminka, rummaanka looma lumin waxtarkeeda, laakiin, liddi ku ah, kaliya ayaa lagu kordhiyay, sababtoo ah waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo faa'iido leh. Diirad gaar ah ayaa la siiyaa juice ee berry, kuwaas oo aan ka wada hadli doonaa faahfaahin dheeraad ah.
Sidee loo kariyaa sharoobada maple, iyo sida ay faa'iido u leedahay
Maanta, sharoobada maple waxay caan ku noqotay sumcadda sonkorta dabiiciga ah. Dhalooyinka leh dareere brown ah ayaa laga heli doonaa jikada, taageerayaasha cuntooyinka caafimaadka leh iyo kuwa raadinaya in ay ka takhalusaan miisaan dheeraad ah. Waxaa la rumeysan yahay in alaabkan xayeysiisku uu jidhka ku siinayo waxyaabo muhiim ah oo caawinaya inuu noqdo mid caafimaad qaba.
Waa maxay abuurka gabbaldayaha ee haweenka
Noocyada noocan oo kale ah ee geedi socodka dabiiciga ahi waxay leeyihiin rafcaan aan caadi aheyn waxayna leeyihiin saameyn cajiib ah oo ku saabsan jirka haweenka. Qiimaha badeecadda waxaa go'aamiya joogitaanka walxaha firfircoon ee nuclei iyo jeermiska abuurka. Maqaalkani waxaan kuu sheegi doonaa, maxaa sababtoo ah rashadani waxay faa'iido u tahay caafimaadka dumarka Dhadhanka iyo Calaamadaha Seeds of miraha gabbaldayaha ayaa la bislaaday abuurka miraha gabbaldayaha ee sanadlaha, oo ku yaala xayawaan ballaaran oo la xareeyey leh tufaax quruxsan oo jaale ah.
Cuntooyinka ugu wanaagsan ee tinctures ka feijoa
Aagahayaga, feijoa waa dibedda. Tani waxay dhadhamisay miro aan caadi ahayn oo la mid ah kiwi, cananaaska iyo illaa heerkulka strawberries. Waxaa si weyn loo isticmaalaa karinta, diyaarinta noocyo kala duwan oo suxuun leh: macaanka, keega, saladhyada. Qaar badan ayaa ku habboon inay sameeyaan tincture feijoa. Cabitaankani ma aha oo kaliya caraf udgoon, laakiin sidoo kale guryaha faa'iido leh.
Sida loo kariyo salad kalluunka Korean zucchini ee jiilaalka guriga
Qof walba waa ogyahay dabacasaha Korean - saxan ayaa muddo dheer oo qumman la helay dadweynaha. Zucchini Kuuriyaanka waa mid aad u yar, inkastoo Saladkan la ilaaliyay uu leeyahay dhadhan aan fiicnayn. Hoos waxaa ku qoran wax la yiraahdo diyaarintiisa. Takhasuska dhadhanka Dhadhanka saladkan, zucchini iyo karootada ayaa ah mid caqli gal ah, koronto-yaqaanku wuxuu xoojinayaa kala duwanaanta dhadhanka, iyo basbaaska iyo basbaaska kulul waxay ku siinayaan fiiq iyo jajab.
Sida loo diyaariyo tincture of plomme on vodka iyo sida ay faa'iido leh
A daaweyn cajiib ah iyo kaliya khamriga a wacan khamriga - tincture tubada guri. Dareemka dhadhanka ah iyo karisku wuxuu si tartiib ah u deyn karaa habeenkii jiilaalka ee dheer, isaga oo xasuusinaya xagaaga kulul. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah in aanay adag tahay in la sameeyo cabitaanka noocan oo kale ah. Waa maxay tincture tubta faa'iido leh Ha u malayn in tincture laga sameeyey vodka iyo plomme - kaliya cabbitaan aalkolo ah.
Sidee loo sameeyaa tkemali gudaha Georgian: waa cunto-soo-kabid talaabo tallaabo ah
Tkemali waa juus ah macaan oo jilicsan oo la isku qurxiyo oo si wanaagsan u roon ee suxuunta hilibka. Ku saabsan diyaargarowga sida ku cad qotada classic, iyo sidoo kale ku saabsan diyaarinta xilli jilicsan ee jiilaalka, waxaan ku tilmaami doonaa maqaalkan. Waxa aad u baahan tahay inaad qaadato plomme Si aad u diyaariso suugada, waxaad u baahan doontaa tkemali (iyadu waa tubta), casaan ama jaalle.
5 cunto fudud oo tincture ah oo madow-fruited (madow ama madow madow)
Chokeberry, chokeberry, bacriminta madow waa miro yar oo faa'iido leh oo ay ku jiraan maadooyin qiimo leh dadka, gaar ahaan fitamiinada C iyo P, asids organic, sonkor, iodine. Waxaa loo tixgeliyaa bakeeriyo caafimaad. Daaweynta iyo ka hortagga cudurrada kala duwan, tinctures ayaa inta badan loo isticmaalaa. Waxaan kuu sheegi doonaa faa'iidooyinka tincture this berry, taas oo cudurada loo isticmaalo iyo sida loo diyaariyo - hoos.
Cunnooyinka loogu talagalay qaboojiyeyaasha karraaniga ah ee moonshine
Xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, jidhka bani'aadamka wuxuu inta badan ka jiraa la'aanta fiitamiinada, difaaciisu hoos u dhacdo, qofkuna wuxuu noqdaa mid u nugul cudurrada faafa ee infekshanka iyo infakshanka. Haddii guga iyo xagaaga ay jirto fursad ah in lagu xoojiyo jirka iyadoo la adeegsanaayo ilo cusub oo fitamiino ah, ka dibna xilliga dayrta iyo jiilaalka waxaad u isticmaali kartaa ujeedada dabiiciga ah ee dabiiciga ah - khamriga ama isku dhafka.
Cuntada ugu fiican ee samaynta dabeylaha ka soo baxaya tubta, ama sida loo sameeyo baalal
Lulubka liin - cabitaan dhadhan leh oo udambeysan. Magaca laftiisa wuxuu wax ka qabanayaa wax xasilan, si xamaasad leh oo raaxo leh. Tani ma aha oo kaliya cabitaan weyn oo loogu talagalay wada sheekeysi wacan, laakiin sidoo kale fursad ay kula yaabaan martida. Intaa waxaa dheer, cirridku waa daawo aad u fiican oo ka caawiya dhibaatooyin caafimaad oo badan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cuntada guriga lagu kariyo 2019